Unyaka nonyaka ngesikhathi esifanayo, abasebenzi ngempela uphakamisa lo mbuzo: "Indlela ukukhetha isipho lokuzalwa kwakhe nomqashi?" Futhi njalo kufanele ezikudidayo phezu kuka ukujabulisa boss futhi kanjani uyilethe uphawu ukunakwa abangaphansi. Sethula wena nge ukukhethwa best lokuzalwa imikhonzo umuntu abakhulu wesifazane.
Noma yimuphi umuntu bhizinisi ayikwazi khumbula lonke ulwazi ezibalulekile ngaye. Ngakho-ke, incwadi yamarekhodi noma idayari uyohlale olufanele induna. Nokho, ukuze senze isipho esinjalo okungavamile, ukuze ngaye noma isikhumba ikhava uqophe zokuqala oqwembeni ikhanda. Nje izinga ezifana abakhona ezinhle ngokuqinisekile ngeke sijabulise ubani, ngisho nengwenya kakhulu, Chief.
Njengoba isipho lokuzalwa boss sika kungaba qualitative zokubhala. Ngena izincwadi ezibalulekile kuyoba nicer ezibizayo umthombo ngepeni noma ipeni oluxube zegolide. Ehlonishwayo futhi stylish, akunjalo?
Uma ukuqaphela ukuthi umphathi wakho unesithakazelo, bese ukhetha isipho boss lokuzalwa ka- akuthathi kakhulu. Ngo Angler okhuthele neze eziningi izinduku ukudoba kanye ngenela. Ibhola abalandeli uzobe ajabulela Ithikithi umdlalo olandelayo wethimba esithandayo. Abathandi bemvelo like abe imbiza entsha noma isikhwama ekulaleni. Umshayeli bayojabulela idivayisi yesimanje. Umqashi unesithakazelo travel, kuyoba emangalisayo happy ipotimende entsha.
Uma umqondisi wakho - umuntu ngomuzwa enkulu amahlaya, isipho kuye kungaba mnandi futhi yasekuqaleni. Ngokwesibonelo, izaqathe kanye izinti - njengoba izindlela kwethonya abangaphansi. Noma isikhwama isibhakela okuyinto, ngaphezu abasebenzi, kungenzeka ufuna ukuveza intukuthelo yabo. Angakwenza nendondo phezu kwesifuba okudweba nombhalo othi "Ukuze boss ubhedu emhlabeni" noma isikibha esinobuso okungavamile isiqubulo: "Ngubani kungasebenzi, futhi akayikudla" Nokho, ngezipho cool kudingeka uqaphe. Kufanele bazi lapho sekuyisikhathi sokuba ayeke futhi ukhethe ilebula ukuthi ngeke besona noma kuzizwisa ekhanda.
Induna - indoda, futhi. Futhi yena, njengabo bonke abanye abantu, kufanele niphumule. Ngakho-ke, isipho esikhulu boss ngosuku lokuzalwa - ithikithi resort, enkabeni nokungcebeleka noma ngisho olandelayo SPA-isikhungo. Ngokuvamile, amnike ithikithi pass endaweni lapho ungakhululeka bese uthatha ikhefu emsebenzini. Kodwa ngalesi sikhathi uyokwazi uphumule kude naye.
Izipho zikaMoya nawo eza kusayithi. Bhala inkampani liculo uhlabelele ke bonke abasebenzi. Dala i-collage yezithombe kwabo bonke abasebenzi futhi ukuphrinta uyibhala ezinkulu. Fit nge-slide show izithombe ngezinto ezibaluleke kakhulu ikhanda lakho. izipho ezinjalo ziyoncibilika inhliziyo aphakeme ngisho kakhulu ze-non-ngokomzwelo.
Futhi-ke, ikhadi kubaluleke kakhulu "Happy Birthday!" IsiKhulu bayokujabulela kabusha ufunde amagama akho uhlobo ayethule ngokuphindaphindiwe, abayitholayo ku ekhabetheni of etafuleni lakho.
Nokho, khumbula ukuthi isipho esihle kunazo zonke nganoma yisiphi isikhulu - ukuthi umsebenzi wakho nente kahle. Zama ngosuku lwakhe lokuzalwa!
Pancake sonto: Kwezikhathi
"Naven" kubhayela ukushisa endlini
Uju Exquisite: ihhashi isoseji